Ohana Island: Blast maruva uye kuvaka Cheats&Kugura – Android Cheats Matipi
Ohana Island: Blast maruva uye kuvaka Cheats&Kugura
Na admin | Gumiguru 21, 2021
Kanganwa nezvese mhirizhonga yemuguta, uye rarama hupenyu kure nekunetseka mumutambo mutsva wekufananidza “Ohana Island”🏝️!
Sunda mahwindo akazaruka, fema mweya mutsva, uye unakirwe nemapuzzle & akapfava 🌼maruva muchitoro chako pa 🌴seaside⛵.
Mechi uye kuputika puzzle, gadzira uye gadzira shopu yako, ita shamwari itsva, win mibayiro, buritsa zvakavanzika zvechitsuwa, uye uve anoda florist ane mitambo iri nyore uye inonakidza.
Mhanya chitoro uye urarame kurota pachitsuwa chetariro, rudo, uye mufaro!
・🏝️Chitoro chako chemaruva: gadzirisa mitambo yepuzzle, sunungura kugona kwako, uye gadzira shopu yako yemaruva kubva kudhibha kuenda kune yakasarudzika, zvese sezvamunoda! Isa mufenicha, mera maruva, nyura kuti uwane mibairo yezuva nezuva, uye kutosimudza 😸pet🐶!
🏝️Yakasarudzika puzzle mutambo dhizaini: match & kuputika mukati 2 panzvimbo yechinyakare match-3! Tsvaga matani emusanganiswa anoputika, nzira dzekutamba, uye mibayiro mumitambo. Koka shamwari yako kuti itambe pamhenderekedzo yegungwa & putika mwero wemaruva!
🏝️Mapuzzle akasiyana: pamusoro 600 mazinga ekutapa-ku-kuputika mitambo inoenderana yakagadzirwa neMYBO, timu inozivikanwa kwazvo yekuvandudza mitambo yakakokwa neROVIO pakuvandudza kwavo mutambo wepuzzle “Angry Shirds Blast”.
🏝️Sangana neshamwari dzako & vatengi: ziva boka revatambi vesango uye ita hushamwari naLily Maka, Kiko Kilani, Lucas Sweet, nevamwe.
🏝️Vhura zvakavanzika: tsvaga mamiriro matsva echitsuwa, sangana nevanhu vekwaunogara, uye unakirwe nengano dzakanaka pakati pevatambi vari mumutambo. Pupurira muchato werudo uye gadzira saiti nemaruva ako!
🏝️Zviitiko zvevhiki nevhiki: kuunza nhanho nyowani dzepuzzle kuti dzirunge mitambo yako & kuwana mibayiro!
🏝️Tamba mutambo wacho pasina Indaneti: usaite njodzi yekufinhwa nguva inotevera yausingakwanise kuwana Indaneti, chengetedza chitoro chako, uye unakirwe nemazinga matsva epuzzle chero nzvimbo chero nguva!
Kuda kutamba Ohana Island?
Isu tichafara kupindura chero yemibvunzo yako kana kunzwa mazano. Ndokumbira utumire email kune info yekubata:
Chikamu: Kubiridzira uye Kubiridzira kana Matipi Matagi: Blast, Vaka, CheatsHack, maruva, Island, Ohana
← Squid Game 3D 2022 – Kubiridzira&Kugura Solitaire Tripeaks Makeover – Kubiridzira&Kugura →
Slash & Peta: Rarama Guild Raids Cheats&Kugura
Squid Dambudziko: Kupona Mutambo – Kubiridzira&Kugura
Dungeon uye Puzzles – Sokoban Cheats&Kugura
Fantastic Beasts’ Legend – Kubiridzira&Kugura
We Are Illuminati: Conspiracy – Kubiridzira&Kugura
Garbage Pail Kids : The Game Cheats&Kugura
Real Boxing 2 – Kubiridzira&Kugura
Inside Out Thought Bubbles – Kubiridzira&Kugura
Emoji Matching Puzzle-Brain Up – Kubiridzira&Kugura
Squid Mitambo Kupona – Kubiridzira&Kugura